अन्तर्घात नेपाली काँग्रेसमा धर्म हो : नृप वड - Dhangadhi Khabar
आरजु देउवा राणालाई अप्ठेरो पर्दैन
कांग्रेसले यसपल्ट पनि जनतासँग नजिक भएको मान्छे भन्दै नगरमा पुनः तत्कालीन मेयर नृपबहादुर वडलाई नै दोहोर्याउने निर्णय गर्यो। सुरुमा एकल जित्छौँ भनेर कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्वले गठबन्धन रुचाएको थिएन।
तर, केन्द्रबाट नै उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन भएपछि यहाँ कांग्रेसले मेयर तथा माओवादीले उपमेयर पाएको थियो। गठबन्धन हुँदा झन् जित्ने निश्चित भएको दाबी गरेका वड निर्वाचनमा भने नराम्रोसँग पराजित भए। उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल सँग १२ हजार ४८ मतले पराजित भएका थिए।
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनगढी उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसले प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा जित हात पारेको थियो। तर यस पटक दुवै पद पद गुमाउँन पुगेको छ ।
- गठबन्धनसहितको कांग्रेसले धनगढीमा किन पराजय भोग्यो त? गठबन्धन नहुँदा पनि एक्लै जित्ने दाबी गरेको कांग्रेस धनगढीमा किन हार्यो?
- गठबन्धनका दलबाट पनि साथ पाइएन भन्नुभएको हो?
- दलभित्रबाटै पनि अन्तर्घात भयो?
- अन्तर्घात गर्नेहरुलाई छानबिन, कारबाही होला नि?
- वडातहसम्मै संगठन भएको दलीय व्यवस्थामा नागरिकले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई किन चुने होलान्?
- स्वतन्त्र उम्मेदवारले नगर विकास गर्न सक्दैनन् भन्ने दोहोर्याउन खोज्नुभएको हो?
- अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
- धनगढीमै कांग्रेसले हारेपछि यस क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने तयारी गरेकी आरजु देउवा राणालाई पनि अप्ठेरो पर्ने देखियो नि?
सोमबार ०९, जेठ २०७९ १०:२० मा प्रकाशित
#गठबन्धन #नृपबहादुर वड #धनगढी उपमहानगरपालिका #गोपाल हमाल